यस्तो छ ४ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको ‘रोडम्याप’ (मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग अन्तरवार्ता) | Ratopati
यस्तो छ ४ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको ‘रोडम्याप’ (मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग अन्तरवार्ता)
personलिलु डुम्रे exploreकास्की access_timeफागुन ४, २०७४ chat_bubble_outline0
प्रदेश ४ को मुख्यमन्त्रीका रूपमा उनको प्रचार गरियो । लमजुङ ‘ख’बाट जितेका गुरुङलाई मुख्यमन्त्री बन्न तगारोका रूपमा तनहुँका एमालले नेता किरण गुरुङ देखा परे ।
अन्ततः किरणलाई पन्छाउँदै उनले मुख्यमन्त्रीको बाटो तय गरे ।
गुरुङसँग प्रदेश ४ को स्रोत साधनको अवस्था, भावी सरकारका प्राथमिकता र सरकार निर्माणलगायतका विषयमा रातोपाटीका लागि लिलु डुम्रेले पोखरामा गरेको कुराकानी :
औद्योगिकीकरणका लागि तपाईंको भूमिका कस्तो हुनेछ ? प्रदेश ४ मा आर्थिक समृद्धिका लागि औद्योगिक क्षेत्रले कति भूमिका खेल्ने देख्नुहुन्छ ?
हाम्रो कार्य विधिले यो मन्त्रालय लियो भने बरियता उपल्लो हुने बनेर व्यवस्था गरेको छैन । अहिले पहिलो र दोस्रो भनेर छुट्याएको छैन । कार्य विधिले सातवटा मन्त्रालय तोकेको छ, सबै बराबर भन्ने छ ।
तपार्ईं मुख्य मन्त्री भएपछि अर्को दलले मर्यादा क्रममा दोस्रो र शक्तिशाली मन्त्री आकाङ्क्षा राखेको होला । मन्त्रीका आकाङ्क्षी धेरै देखिन्छन् । कसरी मिलाउनु हुन्छ ?
हाम्रो कार्य विधिले यो मन्त्रालय लियो भने बरियता उपल्लो हुने बनेर व्यवस्था गरेको छैन । अहिले पहिलो र दोस्रो भनेर छुट्याएको छैन । कार्य विधिले सातवटा मन्त्रालय तोकेको छ, सबै बराबर भन्ने छ । मुख्य मन्त्रीले कुन मन्त्रालयको कुन स्टाटस दिने भन्ने हो । संविधानभित्र नपरेको कुरा मुख्यमन्त्रीको अधिकारभित्र पर्छ । त्यसैले मुख्य मन्त्रीपछि आन्तिरक मामला तथा कानुन मन्त्रालय ठूलो होइन । प्रदेशको अवस्थाअनुसार वा सिनियारिटीको हिसाबले उपल्लो तह निश्चित गर्न पनि सकिन्छ ।
स्रोत साधनले हामी सम्पन्न छौँ । सभ्यता वा प्रविधिको कारणले पनि अरू भन्दा अघि छाँै । कार्य शैलीमा पनि अघि छौँ । प्रदेश केन्द्र छनोटमा पनि विवाद नभएको प्रदेश हो । जनताको प्रवृत्ति, राजनीति र स्रोत र साधनको उपलब्धतालाई हेर्दा अहिले पनि १ नम्बर मा छौँ । अबको पाँच वर्षमा पनि हामी एक नम्बरमै रहन्छौँ । पाँच वर्षपछिको एक नम्बरमा फड्कोसहित उन्नति र समृद्धितर्फ लम्किएको हुनेछ ।
‘हाइप्रोफाइल’ केसमा प्राविधिक पाटोका सबुत प्रमाण नै भेटिएनन्’